Nhau - Chii chinonzi Polyvinyl Chloride (PVC), uye Chii Chinoshandiswa?
Polyvinyl Chloride (PVC) ndeimwe yeanonyanya kushandiswa thermoplastic polymers mupasi (padyo nemapurasitiki mashoma anoshandiswa zvakanyanya sePET nePP). Iyo yakasarudzika chena uye inopwanya chaizvo (isati yawedzera yekuwedzera yeplizizizers) mapurasitiki. PVC yakave yakatenderera kwenguva yakareba kupfuura mapurasitiki mazhinji akatanga kugadzirwa muna 1872 uye nekutengesa kwakaburitswa neBF Goodrich Kambani muma1920s. Kana tichienzanisa, mazhinji mamwe mapurasitiki akajairika akatanga kugadzirwa uye akazove ekutengeserana anoshanda chete muma1940 nema1950. Iyo inoshandiswa zvakanyanya kazhinji muindasitiri yekuvaka asi inoshandiswawo kune zviratidzo, kunyorera hutano, uye sefibhi yezvokupfeka.
PVC inogadzirwa nenzira mbiri, yekutanga seyakaomarara kana isina kupurindwa polymer (RPVC kana uPVC), uye yechipiri sepurasitiki inochinjika. Flexible, plasticized kana yakajairwa PVC yakapfava uye inogoneka kukombama kupfuura uPVC nekuda kwekuwedzeredzwa kwepurasitiki senge phthalates (semuenzaniso diisononyl phthalate kana DINP). Flexible PVC inowanzo shandiswa pakuvaka sekuputira newaya dzemagetsi kana pakapfava dzimba, zvipatara, zvikoro, nedzimwe nzvimbo uko nzvimbo isina huturu iri pekutanga, uye mune dzimwe nguva sekutsiva rabha.
Rigid PVC inoshandiswa zvakare mukuvaka sepombi yekugadzira pombi uye yekutsvedza iyo inowanzo kutaurwa nezwi rekuti "vinyl" muUnited States. Pombi yePVC inowanzo kutaurwa ne "hurongwa" hwayo (semuenzaniso Chirongwa 40 kana Chirongwa 80). Misiyano mikuru pakati pemapurogiramu inosanganisira zvinhu zvakaita sehuremu hwemadziro, chiyero chekumanikidza, uye ruvara.
Zvimwe zvePVC epurasitiki zvakakosha zvakanyanya zvinosanganisira mutengo wayo wakadzikira, kuramba kwayo kudzikisira kwezvakatipoteredza (pamwe nemakemikari nemaalkalies), kuomarara kwakanyanya, uye kwakasimba simba rakasimba repurasitiki mune PVC yakaoma. Inowanikwa kwakawanda, inowanzo shandiswa uye inogadziriswazve nyore nyore (yakakamurwa nekodhi yekuzivisa resin "3").